१३ गते : अग्निवास(होमादि), गृहारम्भ (घरको जग राख्ने), वास्तुमुहूर्त, द्रव्यप्रयोग वा लगानी, कलशचक्र,
(वि.सं. २०७४ फाल्गुन १३ गतेदेखि वि.सं. २०७४ फाल्गुन १९ गतेसम्म)
प्रतिकूल परिस्थितिले पछ्याएको सङ्घर्षमय समय छ । कामको चाप र दायित्व बढ्नेछ । साताको प्रारम्भमा घरपरिवारमा मतभेद हुनेछ । झैझगडा र मुद्दामामिलाभन्दा टाढै बस्नु उचित हुनेछ । सानातिना कामको झमेला आउनसक्छ । गरिएको लगानीबाट दीर्घकालीन फाइदा नहुन सक्छ । तर मङ्गलबारपछि समय उत्साहवद्र्धक रहने छ । राम्रो समाचार सुन्न पाउनु हुनेछ । अध्ययन अध्यापनका क्षेत्रमा सफल रहेको छ । साथीभाइ, बन्धुवान्धव र इष्टमित्रबाट राम्रो सहयोग जुटाउन सकिन्छ । सन्तानपक्षबाट राम्रै सरसहयोग प्राप्त हुनेछ । तर बिहीबार र शुक्रबार स्वास्थ्यप्रति लापरवाही गर्नु हुँदैन, पाचनप्रणाली र नसासम्बद्ध रोगले दुःख दिन सक्छ । उता बुद्धि र विवेक पनि कमजोर बन्न सक्छ, दृष्टिशक्तिमा कमी आउने छ, व्यवहारिक समस्याले गर्नै पर्ने काममा अवरोध हुने सम्भावना छ । साताको अन्त्यमा प्रेमसम्बन्धमा सुधार आउने छ । शनिबार बेलुकीपख मन आनन्दका लागि आकर्षित बन्नेछ र विलासिताका भावनाहरू जागृत हुनेछन् । शरीर फुर्तिलो हुनेछ, जोस र जाँगर बढ्ने समय छ ।
तपाइको यो साता कत्तिको शुभः छ त ? हेर्नुहोस् तपाई को भाग्य, फाल्गुन ९ गते देखी फाल्गुन १५ गतेसम्मको साप्ताहिक राशिफल
हेर्नुहोस् फाल्गुन २३ गते देखी २९ गतेसम्मको साप्ताहिक राशिफल : तपाइको यो साता कति शुभ ?
हेर्नुहोस् फाल्गुन २१ गते शुक्रबारको राशिफल – दक्षिणकाली माताले सबैको कल्याण गरुँन !